Kubika blog uye zvinonaka mabikirwo
Ndezvipi zvinhu zvinogadzira zvinhu zvakabikwa zvine hunyoro?
Category: Сook panze 0
Hupfu chinhu chikuru chinoshandiswa pakubika. Kupfupisa kunoita kuti zvinhu zvakabikwa zvinyorove, zvinowedzera kunaka, uye zvinochengeta chinhu chakabikwa chiri chitsva kwenguva yakareba. Chero mafuta, senge mafuta kana…
Ndini ndinofanira kurega Grill nyowani ichipisa?
Usati washandisa iyo grill, iwe uchazoda kuibatidza uye kuitendera kuti ipise kwemaminetsi makumi maviri kusvika makumi matatu. Uku kupisa kwekutanga kunosuka grill, kubvisa chero…
Zvinotora nguva yakareba sei kubika 1 3 kg yeGammon?
Iyo yekubika nguva inosiyana ichitsvaga pahuremu hwenyama yako. Kuti uverenge nguva yekubika yegamu kuyera mubatanidzwa. Mubatanidzwa weganamoni musanganiswa ucha…
Mubvunzo wako: Unobika huku yakareba sei pane iyo grill pamadhigirii mazana mana?
Inguva yakareba sei ndinofanira kubika huku pamadhigirii mazana mana? Kubika Huku Chipfuva pa400 ° F: Izvi zvinotora pakati pemaminetsi makumi maviri nemaviri nemakumi maviri nematanhatu zvichienderana nesaizi ye…
Mubvunzo: Chii chinoitika kana iwe uchinge waita spaghetti?
Chii chichaitika kana iwe ukasva spaghetti? Chii chinoitika kana iwe ukapisa pasita mbishi? Pani yekutsvaira yakabikwa kana yasara spaghetti inokonzeresa kuti ma noodles anamatire pamwechete, uye mhedzisiro…
Chii chandingashandise kuchenesa kunze kweiyo Weber yangu grill?
Chii chandingashandise kuchenesa kunze kwegrill yangu? Shandisa chipanji kukwesha parutivi rwegrill yako nesipo yedishi nemvura. Kana…
Unotora nguva yakareba sei uchigocha chando?
Inguva yakareba sei kubika yakazara yechando hove? Vhara iyo hari, uye, kana izere, ngavabatidze chiutsi kwemaminetsi gumi kune 10-pondo hobvu kana maminetsi manomwe kusvika masere pa…
Pane chero chikafu chakakangwa chakagwinya here?
Kana ikadyiwa zvine mwero, chikafu chakabikwa chinogona kuve chikamu cheyakadzikama kudya. Saka, kana iwe uchishamisika 'chikafu chakakangwa chingave chine hutano here? ', mhinduro ndeye…
Ndeapi mafuta iwe aunofanira kukanga huku mukati?
Sarudza maoiri ane hutsi hwakakwira poindi: kupfupisa kwemiriwo, mafuta enguruve, uye mafuta enzungu zvese sarudzo dzakanaka. Mafuta anofanirwa kunge akaenzana pakadzika imwe chete mu skillet,…
Ndingaite sei kuti ndive wekutanga mutsetse wekubika?
Ndeapi hunyanzvi hunodiwa nevabiki vemutsetse? Heano mimwe mienzaniso yehunyanzvi iwe yaunofanirwa kuve nayo kana kukudziridza semutsetse wekubika: Kuzvipira kune mhando. Mutsetse wekubika unofanira…
Kwaziwai! Ini ndinonzi Kate uye ndinoda kubika. Ini ndinogovana nevaverengi vangu zvinonaka zvekubika uye zvinonakidza zvehupenyu hacks kubva pasirese rekubika.
Unoziva sei kuti zviropa zvehuku zvinobikwa?
Inguva yakareba sei iwe wakadzika fry chando chizi curds?
Chii chaunoita iwe kana iro remota rinosimudzwa?
Chii chinoitika kana tikabika chikafu?
Chii chandinogona kubika pamate?
Mibvunzo inowanzoitika: Unofambisa mapapiro akaomeswa nechando here kana kuti kunyungudika?
© 2021 Ngatidyei?
KUTARISIRA VABATI VAKARUDZIRA! Zvese zvinhu zvinoiswa pane saiti zvakanyatsoitirwa ruzivo uye zvedzidzo zvinangwa! Kana iwe uchifunga kuti kutumirwa kwechinhu chero chipi zvacho kunotyora copyright yako, ita shuwa kuti utibate isu kuburikidza nefomu rekubatana uye zvinhu zvako zvichabviswa!